The Marine Corps A-4 Skyhawk agha ugbo elu na-onwem na ihe engine ìhè na mfe.
The ozi nke A-4 skwodron bụ ọgụ ma bibie zaa, iji duru helicopters na-eduzi ndị ọzọ kenkwucha arụmọrụ.
Mepụtara ná mmalite 50s, na A-4 Skyhawk mbụ e codified A-4D dị ka ihe
nuclear iku ugbo elu, ụbọchị naanị, na dabeere na a ukwuu nke ugbo elu na-ebu.
E nwere ọtụtụ ụdị nke A-4-arụ ọrụ.
A-4M na TA-4F na-ugbu a na-eji squadrons nke Marine Corps Reserve.
All ụdị nwere abụọ 20mm egbe na bụ ike na-anapụta ot na nuclear agha ehihie na abalị.
The A-4M eji a isi-elu ngosi (ihuenyo na visor nke pilot).
The Marine Corps Reserve-emi esịnede abụọ squadrons nke A-4s na 12 ugbo elu bụla.
Ke adianade do, onye ọ bụla squad nwere ihe abụọ TA-4
Agba: Argentine Air Force (ocha)
Ot 2-D panel. Ọ dịghị virtual kokpiiti (VC)
Ọsọ kacha: 440 KIAS
Dị ka a ugbo elu bụ nnọọ ike ịchịkwa, kpatụ mkpụbelata kalenda maka takeoff. Kpachara Anya ọdịda! Ọ na-pitching ike! Nwetụrụ ihe dị iche na ya họpụta mmadụ elu, nku! Ọ bụrụ na mmadụ na-enweghị mmebi ọ bụ a na-efe efe na itu kaadi. Na-atụ aro ọdịda ọsọ: 100 KIAS na flaps n'ụzọ zuru ezu lowered.
Emeputa: McDonnell Douglas
Onye edemede: Jean-Pierre Langer